Project Management Solution yeVanoongorora -MarTech Blog
Iyo Project Management Solution yeVanoongorora
China, January 27, 2011 Wednesday, May 2, 2012 Tim Piazza
Kune matatu marudzi emapurojekiti. Iwo aunogona kuzviitira wega, iwo aunogona kubhadhara mumwe munhu kuti akubatire, uye iwo aunoda kubatana nevamwe paari. Project management software ndeyeyechitatu mhando.
Ini munguva pfupi yapfuura ndakawana Mavenlink, yegore-based chirongwa manejimendi application iyo yakafanana neBasecamp, asi ine tarisiro pazvinodiwa zvevanopa mazano nevemahara. Mavenlink inoita kuti iwe ugadzire mapurojekiti, kukoka vatengi, uye nekupa mabasa nechinangwa chekubatana pamwe nekutaurirana, senge Basecamp. Chii chinoita kuti Mavenlink iparadzanise ndiko kuwedzera kweyekubhadhara manejimendi maficha.
Gadzira chirongwa muMavenlink uye unogona kugovera bhajeti. Mukuronga chirongwa ichi, iwe unogadza mabasa uye zvinopihwa. Ipapo iwe unogona kuteedzera mari uye nguva pane yega yega projekiti nebasa, uye kana iyo nguva ichinge yabhadharwa, isa chiyero cheawa. Sezvo mabhiridha achiunganidzwa, iyo dhibhodhi yeprojekti inokuratidza iwe nemutengi kwaunomira pabhajeti.
Ini ndinowana iyo yekubhadharisa chinhu kuva kiyi yezvinhu isipo kubva kune mamwe maapplication ekubatana. Freelancers uye vanopa mazano vanowanzo shanda nevatengi pane projekiti hwaro, uye zvinogona kunetsa kutora nekutora nguva yese yakashandiswa. Kupa mashandiro ekuteedzera bhajeti uye kushuma chinhu kune vese mutengesi nemutengi. Pane zvishoma zvinoshamisa, uye zvichave pachena kana zvinotarisirwa zvasiyana kana shanduko yeprojekti inoda kuratidzwa mukushandurwa kwebhajeti. Mavenlink inoita bhajeti chikamu chehurukuro.
Panzvimbo dzakasiyana panguva yeprojekiti iwe unogona kugadzira ma invoice uye unobvuma kubhadhara kuburikidza nekubatanidzwa kwePayPal. Mavenlink akataurirana chiyero chakasarudzika nePayPal iyo inobvisa mutero wavo wenguva dzose mutengesi. Kune zvakare kubatana neakaundi yako yeGoogle, kugonesa khalendari kubvumirana, kugovana magwaro, uye kukoka kwekukoka.
Zvekubatana pamhepo zvishandiso zvakakosha iyo diki yekudyara munguva inotora kuzvimisikidza. Basecamp inoramba ichizivikanwa nemasangano madiki akakura zvakakwana kuti agadzirise mapurojekiti akaparadzaniswa nevovovovo uye kubhadharisa. Masangano ane yakaoma, kana akawanda akaenzana mapurojekiti anogona kunge ari nani mukushandisa sevha-yakavakirwa mhinduro senge ActiveCollab. Kana iwe uri chipangamazano, wewebhu mugadziri kana wekuzvimiririra dhizaini, Mavenlink inogona kunge yakakukodzera iwe.
Tags: mavenlinkproject management
Tim Piazza mudiwa neSocial LIfe Kushambadzira uye muvambi we ProSocialTools.com, diki bhizinesi sosi yekuwana vatengi vemuno nevezvenhau uye kushambadzira nhare. Paanenge asiri kugadzira matsva ekugadzirisa zvinomhanyisa maitiro ebhizinesi, Tim anofarira kutamba mandolin uye fenicha yekugadzira.
Shanduko: Sangana Nechinangwa chemuenzi wako
Jan 28, 2011 pa 4: 06 AM
Ini ndichangobva kuvhura account yangu yeBasecamp mavhiki mashoma apfuura nekuda kwechikonzero ichi. Ndinoshuva dai ndaiziva!
Ndira 28, 2011 na8: 21 PM
Doug, ini ndaive newe mufungwa pandakanga ndichinyora yangu posvo. Ini ndaiziva kuti wainge wafamba uchibva kuBasecamp uye uchinetseka kuti Mavenlink yaizonyanya kukufarira here. Sezvineiwo zvakakwana, Mavenlink ari nyore kwazvo pachikwama. Iwe haungatombofanirwa kucheka pane kofi yako kubva kune iyo shopu iripazasi. 🙂
Ndira 28, 2011 na4: 29 PM
Ini ndinoshandisa PBworks. Wakavaenzanisa here?
Ndira 28, 2011 na8: 19 PM
Handina… kusvika izvozvi. Zvinotaridza kwandiri kuti PBworks inoshanda zvakanyanya senge pasocial network-chirongwa manejimendi manejimendi. Maonero angu mazana maviri nemakumi maviri nemakumi maviri neshanu ndeyekuti inoshanda zvirinani kumasangano akakura uko iwe unowana munhu wese akamisikidzwa pachirongwa, uyezve wozovadhonza muzvirongwa zvako kuti uwane pfungwa, chokwadi. Izvi hazvingagone kushanda kune weanopa mazano / mutengi mamiriro.
Ndingafarire kwazvo kunzwa maonero ako paPBworks, uye kwaunofunga kuti zvinokwana.
Ndira 28, 2011 na6: 43 PM
Ini ndinotenda chaizvo iyo posvo uye maonero awakaunza kune yako ongororo yeMavenlink. Kunyange ini ndiri chokwadi ndakarerekera (semuvambi weMavenlink), uye ndinogona kushamisika kuti sei ungazomboshandisa ActiveCollab :), ndinofunga wakaita basa rakakura rekuyera nzvimbo uye simba revatori vechikamu.
Ndira 28, 2011 na8: 04 PM
Ndatenda, Sean. Ini ndaishandisa ActiveCollab seVP yeNew Media kusangano rekushambadzira. Nevazhinji vevatori vechikamu zvemukati uye mazana evanobata kunze, isu taida mhinduro yekuzvigadzirira yataigona kugadzirisa uye kusanganisa nemamwe maitiro eapp.
Asi chokwadi chinotaurirwa, ActiveCollab yainetsa uye nemusoro kudzidzisa / kutsigira. Handifunge kuti Mavenlink yaivepo panguva iyoyo. 🙂
Ndira 30, 2011 na6: 05 PM
Inonzwika zvishoma seOnit. Zvichava zvinonakidza kuona kana Mavinlink chiri chinhu chingakwidze magweta. Ndatenda nekuunza izvi kwandiri. Ndakaedza iyo PBworks Zvemutemo edition uye ndakafadzwa nazvo kune zvakajairika zvemukati kubatana, asi zvakadaro zvinonzwa kunge PM akarova pawiki. Izvo zvakati, yave nguva kubva pandakatarisa PBworks.
Hmm, iyoyo ipfungwa inonakidza, Paul. Ini ndinogona kunge ndakanganisa zvisizvo nezve izvi, asi zvinoita sekunge magweta angave anonyanya kufunga nezvengozi dzekuisa ruzivo rwevatengi mu "cloud service" nharaunda. Unogona kutaura kuti gore rinogona kunge rakachengetedzeka kupfuura pasisitendi yepachivande mukati mekambani yemutemo, asi dambudziko nderekuti kana paine kuburitswa kwakaipisisa kwedata revatengi, ndiani aizove nebasa, kambani yemutemo kana gore?
Iwe unoratidzika kunge uchinyanyo ziva nenzvimbo ino. Chii chako kutora pane izvi? Nhengo dzebasa repamutemo dziri kudzikisira sei njodzi yavo kana vachishanda mugore?
Kukadzi 2, 2011 na1: 33 PM
Wakambove nekutarisa kuLumoFlow (http://www.lumoflow.com)?
Inopa imwe nzira inodhura kwazvo kuBasecamp uye iri nyore kushandisa, kunyanya kune vashandisi venguva yekutanga saka yakakwana pakubatana kwevatengi. Iko hakuna kwekubhadharisa mashandiro asi sezvo tarisiro iri mukugadzira inoshanda yekudyidzana nharaunda (kwete purojekiti manejimendi senge neBasecamp).
May 2, 2012 pa 9: 29 PM
Ini ndawana yako blog posvo kuburikidza neGoogle kutsvaga… Uchiri kushandisa Mavenlink? Pfungwa? Ndichiri ini murume mumwe oparesheni (kushambadzira kwewebhu), ndiri mukuda zvakanyanya kweye yakanaka PM chishandiso. Ndanga ndichishandisa WorkETC, asi handisi kunyatsofara nazvo. Basecamp inoita kunge haina kukodzera mushandisi mumwe chete.
Sep 11, 2012 pa 6: 36 AM
Ini zvakare ndinokurudzira kuti iwe uedze Comindware, inogadzirisika mhinduro kupfuura Basecamp, iine hukuru hukuru hweiyo chaiyo-nguva yekuzivisa.
Ndira 9, 2013 na12: 07 PM
Wakafamba sei? Ini ndangowana ichi chinyorwa (2 makore anonoka!)
Ndiri kuongorora kuti ndeyipi yandinoshandisa… iyo sarudzo yatokura!